गोकर्ण प्राथमिक अस्पताल निरीक्षणमा मन्त्री रामेश्वर फुँयाल « Bagmati Page
गोकर्ण प्राथमिक अस्पताल निरीक्षणमा मन्त्री रामेश्वर फुँयाल
काठमाडौं । बागमती प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामेश्वर फुँयालले गोकर्ण प्राथमिक अस्पतालको निरीक्षण गरेका छन् । निरीक्षण पश्चात मन्त्री फुँयालले अस्पतालको थप व्यवस्थापनको लागि प्रदेश सरकारले आवश्यक सहयोग गर्न पहलगर्ने जानकारी गराएका थिए ।
मन्त्री फुँयालले गोकर्णेश्वर नगरपालिका-४ गोकणर्मा रहेको गोकर्ण प्राथमिक अस्पतालको गतिविधि र सेवा सुविधाको बारेमा जानकारी लिदै निरीक्षण गरेका हुन् । उनले बिरामीहरुलाई गुणस्तरीय सेवा दिन र अस्पताललाई व्यवस्थित गर्न सबै एक भएर लाग्नुपर्ने भन्दै त्यसमा तीन वटै सरकारको महत्वपुर्ण सहयोग अवश्यक रहेको बताए ।
नगर प्रमुख सन्तोष चालिसेले अस्पताल भवन निर्माणको लागि पहल भईरहेको जानकारी गराउँदै नगरबाट अस्पताललाई दिंदै आएको सहयोगको बारेमा समेत स्पष्ट पारे । नगरप्रमुख चालिसेले मन्त्री फुँयाललाई प्रदेशबाट आवश्यक बजेटको माग गर्दै नगरमा यस अस्पतालाई थप सुदृढ पारे नगरवासीलाई निकै सहजहुने धारणा व्यक्त गरे ।
निरीक्षणमा गोकर्णेश्वर नगरपालिका प्रमुख सन्तोष चालिसे, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राम प्रसाद आचार्य गोकर्णेश्वर-४ का वडाध्यक्ष श्री कुमार श्रेष्ठ, स्वास्थ शाखा प्रमुख हरि प्रसाद उपाध्याय, गोकर्ण प्राथमिक अस्पताल प्रमुख डा. सृजना पाण्डे, अस्पताल व्यवस्थापन समितिका सदस्य राजकुमार श्रेष्ठ लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
कार्यक्रममा अस्पताल व्यवस्थापन समितिका सदस्य राजकुमार श्रेष्ठ वडा अध्यक्ष श्री कुमार श्रेष्ठ र अस्पताल प्रमुख डा. सृजना पाण्डे लगायतले अस्पतालको आवश्यकताका बारेमा जानकारी गराएका थिए ।
मन्त्री फुँयालले अस्पतालको विषयमा सर्वपक्षीय छलफल समेत गरेका थिए । उक्त कार्यक्रममा अस्पतालले दिँदै आएको सेवा र भोग्दैआएका समस्याका बारेमा अस्पताल प्रशासन प्रमुख टिकाराम खड्काले अवगत गराए ।
वि.सं २०३२ मा स्थापना भएको स्वास्थ्य चौकीलाइ २०७६ साल असारमा गोकर्ण प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र विशेषज्ञ सेवा सहित १५ शैंयाको अस्पतालमा स्तरोन्नति गरिएको थियो । अस्पतालको स्तरउन्नति गरे संगै बागमती प्रदेशका मुख्य मन्त्रि डोरमणि पौडेलले सो अस्पतालको उद्घाटन गरेका थिए । २०७७ साल फागुन १६ गते देखि गोकर्ण प्राथमिक अस्पतालले २४सै घण्टा आकस्मिक सेवा र प्रसुती सेवाको शुरुवात समेत गरेको छ ।